PressReader - Isolezwe: 2018-05-17 - I-DURBAN BUSINESS FAIR IFUKULA OSOMABHIZINISI
I-DURBAN BUSINESS FAIR IFUKULA OSOMABHIZINISI
Isolezwe - 2018-05-17 - EZOMNOTHO -
EMINYAKENI ewu-20 eyedlule, uMasipala weTheku wenyuse izinga lokweseka osomabhizinisi abasafufusa ngokuthi ubanikeze inkundla yokuqhakambisa imikhiqizo yabo, bazethule emakhasimendeni nokuzazisa besebenzisa inkundla esisize abaningi, iDurban Business Fair (DBF).
Ukuzama ukukhulisa nokusimamisa labo somabhizinisi, uMasipala unohlelo lokubhiyozela iminyaka ewu-20 kwaba khona iDBF ngokuthi usondeze uhlelo lokuzikhangisa kosomabhizinisi ezindaweni zabo njengoba kuzokuba khona umbukiso wosomabhizinisi ozoba seHammarsdale Junction kusukela ngoMeyi 25 kuya ku27 Meyi nonyaka. Lo mbukiso uqondiswe kwabahlala e-Inner nase-Outer West.
UMasipala umema umphakathi nosomabhizinisi ukuthi babe yingxenye yalolu chungachunge oluzothatha izinsuku ezintathu oluzohlanganisa inqwaba yezinkundla zokucobelelana ngolwazi, oluzobe luholwa ngomakadebona emikhakheni eyehlukene yezamabhizinisi.
Le nkundla izovula amathuba emikhakheni eminingi okubalwa kuyo imboni yendwangu, ezobuchwepheshe, ezobuciko, ukwenziwa kwamafilimu, ukudla, ezolimo, ezezindlu nokunye okuningi.
Lezi zinkundla ezisondezwe kubantu zendlalela umcimbi omkhulukazi wombukiso waminyaka yonke okulindeleke ukuthi ube se-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre kusukela ngo-18 kuya ku23 Sebthemba kulo nyaka.
IMeya yeTheku, uNkk Zandile Gumede uyakugcizelela ukuthi lo wunyaka wokuthi kubonakale igalelo lo mbukiso waminyaka yonke osube nalo kosomabhizinisi abathuthukayo.
“Lo mbukiso yiwona ohamba phambili ukuthuthukisa amabhizinisi amancane nasathuthuka.”
IMeya ithi lo mbukiso usukhule ngendlela yokuthi usukhiqize inqwaba yosomabhizinisi futhi usudlale enkulu indima ukwehlisa izinga lokungasebenzi kubantu.
“Ngalolu hlelo sesikwazile nokusondeza eduzane imicimbi yezamabhizinisi esezingeni lomhlaba esike yazihlanganisa nalo mbukiso naphambilini. Kulokhu kubalwa i-International Conference of Small and Medium Enterprises ne-Essence Festival,” kusho iMeya.
IMeya ithe zonke lezi zinhlelo zizala izinto ezinhle zodwa eziwusizo kuleli dolobha. Kusimama nesimo sezomnotho, nosomabhizinisi bathola ithuba lokuxhumana nezinhlaka eziwusizo kubona.
“Njengohulumeni siyakholwa wukuthi ngokuthuthukisa ezamabhizinisi sizokwazi ukufinyelela ezingeni lokuthi sithuthukise umnotho nokuthi kwakheke amathuba omsebenzi ikakhulu kulabo abangazange bawathole amathuba phambilini,” kwengeza iMeya.
IPhini lemenenja ophikweni i-Economic Development and Planning Cluster, uPhillip Sithole uthe: “Njengoba uhlelo lweDBF kuhloswe ngalo ukuqhakambisa nokuhlomisa amabhizinisi, luphinde lusebenze ukuveza amathuba nezinye izinto uMasipala onazo ukuthuthukisa osomabhizinisi,” usho kanje.
“Kulo nyaka kugxilwe kakhulu ekuthuthukisweni kwentsha nokuphaphamisa umnotho emalokishini. Lolu hlelo kuhloswe nangalo ukuthi kunxenxwe amabhizinisi nabemboni ezimele ukuthi bathole intuba yokuhlonza amathuba ukuze batshale izimali ngenhloso yokuthi kuthuthukiswe umnotho,” kugcizelela uSithole.
Ngeminye imininingwane ungashayela ku-031 311 4500/2 9971 nomafezile.nzuza@durban.gov.za